Harmonic သည် OTT QoE ကို New Heights သို့ 2017 NAB Show တွင်တွန်းပို့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သဟဇာတပု 2017 NAB Show မှာနယူးမြင့်မှ OTT QoE တွန်း
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 22, 2017 - အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT), ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အတှေ့အကွုံ (QoE) ၏တိုးတက်လာသောအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူ over-the-ထိပ်တန်းဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှုအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမောင်းထုတ်ရန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်, OTT ပေးပို့ဘို့အများအပြားသဲဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ။ OTT bandwidth ကို optimization, အောင်းနေချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနည်းပညာများအတွက်တီထွင်မှုများမှတဆင့် သဟဇာတ အော်ပရေတာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ SD ကကယ်နှုတ်တော်မူကူညီပေးနေအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေသည်, HD နှင့် က Ultra HD တိုက်ရိုက်လွှင့်, VOD နှင့်အချိန်-ပြောင်းကုန်ပြီတီဗီအပါအဝင်န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး, အဘို့အနိမ့်နည်းနည်းနှုန်းထားများမှာဗီဒီယိုက။
"ဒီနေ့ငါးအမေရိကန်နေအိမ်များအတွက်တဦးတည်းသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို OTT န်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေ" Bart Spriester မှာအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ကပြောပါတယ် သဟဇာတ။ "သဟဇာတ အော်ပရေတာအတွက် OTT ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုငွေရရှိအောင်ကူညီခြင်းမှကျူးလွန်နေသည်။ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်ကျနော်တို့ OTT အော်ပရေတာဆော့ဖျဝဲကရိယာသို့မဟုတ် cloud-ဇာတိ applications များပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်နိမ့်အောင်းနေချိန်, လျှော့ချကြားခံ, ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့်တိုးချဲ့ bandwidth ကိုထိရောက်မှုနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှုကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ "
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ streaming သောအခါအနိမ့်အောင်းနေချိန် OTT အော်ပရေတာအတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခုနစ်ခုစက္ကန့်များအတွက်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာနှောင့်နှေး; တိုက်ရိုက်လွှ OTT streaming များအဘို့နှောင့်နှေး 30-60 စက္ကန့်များ၏အကွာအဝေးတွင်ပိုမိုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, သဟဇာတ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ၏အောင်းနေချိန်ကိုက်ညီမယ့် Real-time streaming များလုပ်ငန်းအသွားအလာတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
"OTT များအတွက်အနိမျ့အောင်းနေချိန်, အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များများ၏ပို့ဆောင်မှုအဘို့, အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ်" ဟု Darryl ဂျက်ဖာဆန်, VP, Post ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကလည်း, အား NBC အားကစား Group မှ။ "စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ဖြစ်ပျက်ရဲ့ screen ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိသောအရာကိုအကြားရှိကွောငျးဆိုသုံးနေပြီအချိန်ယနေ့ခေတ်ကြည့်ရှုရန်အမှန်တကယ်လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့သောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားနေ သဟဇာတ OTT ဗီဒီယိုလျှော့အောင်းနေချိန်၏ဧရိယာ၌အောင်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအရည်အသွေးအကယ်နှုတ်တော်မူရန်ကြိုးစားကြသည်အဖြစ်ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာကိုပံ့ပိုးပေးဘို့ဂိမ်း-changer ဖြစ်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
သဟဇာတ'' s ကိုအနိမ့်-အောင်းနေချိန် streaming များလုပ်ငန်းအသွားအလာသစ်ကိုအဖြစ်များသည့်မီဒီယာလျှောက်လွှာ Format ကို (CMAF) တွင်ထုပ်ပိုးအကြောင်းအရာတစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းနှင့် HTTP လွှဲပြောင်း encoding က chunked ဖြစ်ပါတယ်။ OTT ပေးပို့တစ်ခုထွန်းသစ်စမီဒီယာစံ, CMAF HLS ဖွ MPEG-Dash device များအတွက်သီးခြားအကြောင်းအရာ package ရန်လိုအပ်ကြောင်းလျော့နည်းစေသည်။ အတွက်အသစ်သောပုံစံ၏အသုံးပြုမှု သဟဇာတ multiscreen ထုပ်ပိုးနှင့်မူရင်းဖြေရှင်းချက်မသာတိုက်ရိုက် streaming များအတွက်အောင်းနေချိန်လျှော့ချခြင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ရှုသည့် OTT တိုးတက်ကောင်းမွန်ပါကလည်း OTT ဖြန့်ဖြူး Workflows ရိုးရှင်းစွာ။
သဟဇာတ ထို့အပြင်ဖော်ပြသတ်ကွန်ရက်များအဘို့ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ် EyeQ (TM) နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ထုပ်ပိုးနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. သုည-rated မိုဘိုင်းနှင့် xDSL ကွန်ရက်များအပ်သိသိသာသာတိုးတက်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးတစ်ခုဆန်းသစ်သစ်ကိုဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုအသစ် EyeQ ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်အလုပ်သမားအော်ပရေတာတသမတ်တည်းတိုးတက်ကယ်မနှုတ်နိုင် HD ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး set-top မှ Low-bandwidht DSL လိုင်းများမှအဖြစ်သုည-rated မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုများ၏3Mbps ထိ bandwidth ကိုန့်အသတ်ကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိဘဲ 4G / 1.5G ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ချိတ်ဆက်ထားသောသေတ္တာများ။
အဆိုပါ EyeQ နည်းပညာဗွီဒီယိုအရည်အသွေးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲရာခိုင်နှုန်းကို 50 မှတက်နေဖြင့် OTT ဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းမှုနှုန်းလိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချဖို့လူ့ Visual စနစ် leverages ။ အော်ပရေတာစှာလျှော့ချကြားခံနှင့်အတူမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်ပျော်မွေ့နိုင် Higher-resolution ကိုဗွီဒီယို streams ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဤစွမ်းဆောင်နိုင်မှု employ နိုင်သည် - ပင်သတ် OTT / ABR ကွန်ရက်များကျော်။
သဟဇာတ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် 2017 မှာ OTT ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဘို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန်, တဲ SU1210 ။
အယ်ဒီတာမှတ်ချက် - ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/သဟဇာတ/သဟဇာတ-EyeQ.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: သဟဇာတ EyeQ (TM) အချိန်နှင့်တပြေးညီဗီဒီယို Compression ကို Optimization ဖြေရှင်းချက်
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ပို့ခြင်း သဟဇာတ HD အောင်းနေချိန် NAB 2016 NAB16 OTT QoE SD က Ultra HD 2017-04-26
ယခင်: အဆိုပါ 360 NAB Show မှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဇာတိ UHD 2017-ဒီဂရီ VR, အတွေ့အကြုံများဝေငှအထိသဟဇာတနှင့်အပြာရောင်က Man Group မှအဖွဲ့
နောက်တစ်ခု: PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, သဟဇာတအတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ